Vaovao - Ny hatsaran'ny fanavaozana, ny fironana vaovao amin'ny "fanamboarana" ao Shina
Ny hatsaran'ny fanavaozana, ny fironana vaovao amin'ny "fanamboarana" ao Shina
Ny tolakandron'ny 17 desambra, dia nanatanteraka ny lanonana fankalazana isan-taona sy ny fihaonana an-tampony ny fihaonana "Beauty of Manufacturing" tamin'ny taona 2019, notohanan'ny China Made Network sy ny filankevitra Shina ho an'ny fampiroboroboana ny varotra iraisam-pirenena (CCPIT), ao amin'ny Nanjing Greenland Zipong Intercontinental Hotel. Nivory tao Jinling ny SGS, BV, TUV Nande, solontenan'ireo orinasa mpandresy ary ny fampahalalam-baovao mahazatra any Jinling hanatri-maso io hetsika be voninahitra io tany Shina. Ny sasany amin'ireo vokatra nandresy dia naseho tamin'ny lanonana fanolorana.
Mandritra ny fotoana manasongadina dia orinasa 49 miaraka amin'ny vokatra 57 no mamirapiratra.
Ny fisafidianana "Beauty of Manufacturing" any Sina dia mandinika ny vita vita any-China izay mibanjina ny masony, mitady ny vokatra sarobidy; avy amin'ny fangatahana ny vokatra tamin'ny volana Janoary ka hatramin'ny fanombohana mialoha tamin'ny volana Oktobra, dia vokatra miisa 9.917 no voaray. Taorian'ny fanombohana mialoha dia vokatra 458 no niditra tamin'ny dingana fanombanana farany, ary avy eo ny fanombanana dia nalaina avy tamin'ny lafiny momba ny kalitao vokarin'ny vokatra, ny fiovana vaovao, ny fifandraisan'ny olombelona-solosaina, ny fiarovana sy ny fiarovana ny tontolo iainana, ny vokatra aestetika sy ny fika hafa. Farany, vokatra tsara 57 sy orinasa 49 no nahazo ny toerana voalohany.
Nivoaka ny vondrona Fujian Fenan Aluminium ary nahazo ny loka.
"Ny vaovao dia velona, ​​ny plana taloha; ny vaovao ho lasa, ny antitra." Avy amin'ny olona mankany amin'ny firenena, ahoana no hahatongavantsika amin'ny alehantsika? Ahoana ny fomba handraisantsika ny sakamalaho amin'ny fampandrosoana sy ny Pierce ilay "valindrihana"? Ny valiny dia ny "hamoha" ny fangatahana tsena ary hanao fanavaozana feno fahasambarana.
FOEN Fen 'dia mifantoka amin'ny fampifangaroana angovo vaovao amin'ny tranobe nentim-paharazana, mitondra teknolojia vaovao, modely vaovao, hevitra vaovao ary serivisy vaovao amin'ny tsena, mahatsapa ny fifaninanana samihafa, fanatsarana ny fitarihan'ny marika, fampielezana tsy tapaka ny feon'ny marika sinoa ho an'izao tontolo izao, ary hanao. tia izao tontolo izao izay vita amin'i Made-in-China.